UMphathiswa wezoKhenketho waseSeychelles uphonononga amaziko amancinci eBel Ombre eMahé
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » UMphathiswa wezoKhenketho waseSeychelles uphonononga amaziko amancinci eBel Ombre eMahé
Utyelelo loMphathiswa Wezokhenketho waseSeychelles eBel Ombre eMahe.
Ababoneleli abaninzi beendawo zokuhlala zokhenketho baveza iimveliso ezisemgangathweni ophezulu, beqwalasele iinkcukacha kwaye basebenza kwimigangatho yeenkwenkwezi ezintlanu, Umphathiswa Wezangaphandle Nezokhenketho, uMnu.Sylvestre Radegonde, utshilo ngolwesiHlanu, Agasti 5, 26, ngethuba lotyelelo amaziko amancinci eBel Ombre.
Umphathiswa ngolwe-Sihlanu utyelele amaziko amancinci ali-15, ebambe iingxoxo nomnini / nabaphathi kunye nabasebenzi.
Uzive ngokwakhe imiceli mngeni abajongana nayo kwaye wabacebisa ngamathuba afumanekayo kubo.
UMphathiswa uRadegonde wayekhatshwa kukutyelelwa nguNobhala oyiNtloko kwezoKhenketho, uSherin Francis.
Ukuqhubeka nomsebenzi wakhe wokuqonda ngcono ishishini lezokhenketho kunye nabadlali balo, umphathiswa ngolwe-Sihlanu utyelele amaziko amancinci ali-15, ebambe iingxoxo nomnini / abaphathi kunye nabasebenzi kunye nokuzibonela ngawabo umngeni abajongana nawo nokubacebisa ngamathuba afumanekayo kubo. . Ukutyelela la maziko amancinci kubaluleke kakhulu kuba bafuna inkxaso engaphezulu kunamaziko amakhulu kwaye bathwele umtsalane wesiCreole esihlala siphulukana nemixokelelwane kunye neendawo ekuchithelwa kuzo iiholide, utshilo uMphathiswa uRadegonde.
Ukubuk 'iindwendwe kweCreole luphawu oluxabisekileyo kwaye luphawu lwabadlali abancinci kwicandelo lokhenketho, utshilo. Ixatyiswe ngu abaninzi batyelela iSeychelles, le yinto iindwendwe ezizibonela ngokwazo kubabuki zindwendwe kumaziko amancinci enza izijekulo ezincinci, nokuba ziyabulisa ngeziselo zalapha okanye zibapha ukutya okuphekwe ekhaya, uninzi lwabo oluzifumana luthandana nolu bafumanisa iincasa ezingaqhelekanga ze-creole cuisine.
Umphathiswa u-Radegonde wayehamba nohambo lwakhe e-La Maison Hibiscus, kwigumbi lase-Cove Holiday, e-Beach Cottages, e-Beach Cove, e-Drake Sea Side Apartment, e-Surfers Cove, e-Treasure Cove, e-Bungalow ka-Daniella, e-Casadani, e-Villa Rousseau, e-Forest Lodge, e-Le Chant de Merle , Bamboo River Lodge, iPalm Seychelles kunye neMarie Laure Suites nguNobhala oyiNtloko kwezoKhenketho, uSherin Francis, kunye neLungu leNdlu yoWiso-mthetho yeSizwe ye-Bel Ombre, oHloniphekileyo uSandy Arissol.
U-Agasti ube yinyanga exakekileyo kuninzi lwe amaziko atyelelweyo, abaninzi baqinisekisa ukuba ukubhukisha kuyenyuka ukusukela kwisigaba sokugqibela sokuvulwa kwelizwe ngoMatshi ophelileyo.
Ethetha ngendlela abazilungiselele ngayo kule meko, xa kuthathelwa ingqalelo ishishini elingeneyo, baqaqambisa ukuba bajike kukhenketho lwasekhaya olube negalelo ekugcineni iingcango zabo zivulekile.
Ngokurhoxiswa kwabatyeleli bamanye amazwe kuya kusiba rhoqo, abanini bamashishini bathi bamkele indlela ebhetyebhetye ezisa izabelo, ezinye iindwendwe zihlehlisa ukuhlala kwazo endaweni yokurhoxisa ngokupheleleyo.
Ngelixa uninzi lwamaziko endawo amancinci okhenketho efumana iindwendwe ezivela kwimarike ezisakhulayo, kukho iqaqobana elisaxhomekeke kwezesintu. UMphathiswa uRadegonde ubakhumbuze ukuba kufuneka bazame ukungena kwiimarike ezinokubakho, ezinjengeMpuma Yurophu kunye ne-UAE, kwaye baphonononge iindlela zabo zokuthengisa ukuze baphile, ezinokwenziwa phantsi kwesikhokelo seSebe lezoKhenketho.
Ukunqongophala kwabasebenzi abanokuthenjwa ngomnye wemiceli mingeni yabo, batsho, uninzi lwabanini beendawo beqinisekisa ukuba bazama konke okusemandleni abo ukugcina abasebenzi baseSeychellois bodwa. Nangona abanye bephumelele kule nzame, uninzi luchaze ukuba abanye babasebenzi basekuhlaleni abazinikelanga kushishino kwaye abazimisele ukufaka ixesha kunye nomzamo ofunekayo. Umnumzana uLoizeau waseCasadani ubonakalise ukuba abasebenzi basekuhlaleni bahlala bekhetha, nangona kunjalo, nje ukuba abantu abangasebenziyo basuswe kubemi bethu, abangabantwana, abantu abadala, abo bangakwaziyo ukusebenza nabo bangavumiyo ukusebenza, akukho nto ininzi bayenzayo kwaye ngaxa lithile, kuya kufuneka bafune umsebenzi phesheya.
Ukwenza ukuba imisebenzi emininzi ibekho kubakhenkethi kwindawo ekuyiwa kuyo ibingumxholo wengxoxo, uninzi lwabanini bezindlu befumana iindwendwe zabo zikhangela izinto ekufuneka bezenzile, umba awuphenduleyo uMphathiswa uRadegonde, ephinda phinda ukuba umsebenzi uyenziwa ukutshintsha oku njengoko inganiki nje kuphela iindwendwe izinto zokwenza kodwa nezizathu zokuhlala ixesha elide kwindawo ekuyiwa kuyo kunye nokwandisa inkcitho, ukuzisa ingeniso kwilizwe.
Ezinye iinkxalabo ekuxoxwe ngazo zibandakanya ukuphazamiseka kwengxolo, ungcoliseko, ukungcola kwenkunkuma kunye nokunciphisa ukufikelela elunxwemeni ngenxa yokwenzeka okuthile.
Ngaphandle kwale mingeni, amaziko anempendulo entle, uninzi lwabanini-zinkampani beqinisekisa ukuba ilizwe livulwe ngexesha elifanelekileyo, libanika ithuba lokuphila. Indawo eya kuvulwa phambi kokuba abanye bayinike ukhuphiswano, u-PS Francis uphendule, kwaye amanyathelo afanelekileyo elizwe enza ukuba kube lula kwaye kube nomtsalane ngakumbi kubantu ukuba bahambe njengoko ilizwe lifumana iindwendwe ukusuka nase-Alaska.
Ethetha ngotyelelo, u-Arissol oHloniphekileyo wathi uzibone zineziqhamo njengoko bezinxibelelana nabantu abanomdla, befunda ngakumbi ngemeko yabo kunye neenkxalabo zabo, ezibandakanya imiba enxulumene ne-GOP kunye nabasebenzi abangathembekanga. Wayekwisivumelwano noMnumzana Rousseau waseForest Lodge, owathi inkqubo yemfundo yaseSeychelles yezoKhenketho ibalulekile kolu shishino kwaye abafundi kufuneka baqonde ukuba kuninzi ubomi behotele obufuna kwaye obufuna ukuzincama kunye nothando.
Bachukunyiswe ngamaziko abatyeleleyo, bobabini uMphathiswa uRadegonde kunye noPS Francis bagqabaze ngendlela amanye ala maziko amancinci azibonisa ngayo iimveliso ezisemgangathweni ophezulu, ejonge kwiinkcukacha kwaye esebenza kwimigangatho yeenkwenkwezi ezi-5.
Utyelelo lweveki nganye luyinxalenye yeenzame zoMphathiswa uRadegonde ekomelezeni ubudlelwane bakhe nabalingisi kwicandelo lokhenketho lwasekhaya oluza kuqhuba umsebenzi wakhe wokulwa nemiceli mngeni ejongene nolu shishino phantsi kwepotfoliyo yakhe.